Soomaaliya oo raadineysa khabiir dhanka lacagaha ah si ay u beddesho lacagtii hore - Halbeeg News
Soomaliya oo aan muddo lacag daabacanin ayaa caqabad kala kulmeysa dib u kabashada dhaqaalaha xuquuqda sawirka: online
MUQDISHO(HALBEEG)-Dowladda Soomaaliya ayaa raadineysa khabiir ku xeeldheer dhanka daabacaadda lacagaha oo uu fadhigiisu yahay magaalada Neyroobi si loo daabaco lacag cusub oo bedesha lacagtii hore.
Saraakiisha dowladda ayaa kulankii u danbeeyay ee bishii la soo dhaafay ka dhacay Nayroobi kula kulmay madax ka tirsan hay’adda lacagta adduunka ee IMF u sheegay in Bangiga Dhexe ee Soomaaliya uu sameeyay naqshadda lacagta Soomaaliya loona magacaabay guddi farsamo oo ka shaqeyn doona daabacaadda lacagta cusub.
Lacagta cusub ayaa la qorsheynayaa in ay ka caawiso Bangiga Dhexe ee Soomaaliya in ay dhisto kayd lacag oo looga golleeyahay sameynta nidaam lacag bixin ah oo xoojiya sharciyada bangiyada dalka.
“Markii sidaa loo sameeyo qaab dhismeedka lacag daabicidda lana helo qarashkii lagu daabici lahaa lacagta cusub waxaan rajeyeynayaa in hay’adda lacagta adduunka naga caawiso inuu nala shaqeeyo khabiir dhanka lacag daabicidda oo uu fadhigiisu yahay Neyroobi si uu Bangiga dhexe uga caawiyo dib u habeynta dhaqaalaha dalka” ayuu yiri masuul ka tirsan Dowladda oo aan magaciisa sheegin.
Wajiga koowaad ee daabacaadda lacagta cusub ayey Soomaaliya ku daabici doontaa 752 milyan oo lacag cusub taas oo lagu badali doona lacagaha hadda laga isticmaalo dalka.
Wajiga labaad ee daabacaadda lacagahan cusub ayay dowladda kusoo daabici doontaa lacag intii hore ka badan aywaxaana lacagahaas dhammaantood loo samaynayaa shuruucda lacagaha iyo habraacyada maamulka keydka Soomaaliya.
Soomaaliya oo dagaallo sokeeye ku jiray tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya bishii Janaayo 1991 ayaanan daabacanin lacag rasmi ah balse haatan dowladda Soomaaliya ayaa wadda dadaallo ay dib u habeyn ugu sameyneyso nidaamka dhaqaalaha dalka.
Miino ku qaraxday suuq lagu iibiyo xoolaha oo ku yaalla Goof-gaduud